Nzira yekufungidzira mutengo wedombo? Nyowani nyowani 2021. Matipi makuru
Nzira yekufungidzira sei mutengo wedombo?
Ziva dombo rako
Tsvaga mararamiro ako ematombo
Ziva misika yako yematombo
Kunze kwemadhaimani, hapana sosi inoshanda yemutengo wedombo pasi rose. Dzimwe nyika dziri kuyedza kuseta mitemo. Asi mitemo iyi inoshanda chete mune imwe yeidzi nyika. Munyika zhinji dzepasi, hapana mutemo.
Mutengo wedombo unongova mugumisiro wechibvumirano pakati pemutengesi nemutengi. Ehezve, pane mirau yakakosha yekufungidzira kukosha kwematombo anokosha, ayo anotsanangurwa pazasi.
Chokutanga, unofanira kuziva dombo rako, kureva, ndeipi mhuri yebwe? Ndezvipi zvakasiyana-siyana dombo? Izvo zvakasikwa kana zvigadzirwa here?
Zvino, kana zvichizoitika kuti ibwe iri rechisikirwo, mubvunzo unotevera ndewokuti: Unobatwa here kana kuti kwete?
Kana dombo rako richibatwa, mubvunzo unotevera ndewokuti: Ndeupi rudzi rwekurapwa kwakaitwa mubwe?
Izvi kutanga parameters zvino zvichatibvumira kuti titange kufungidzira kunaka kwedombo.
Izvo zvinowanzo rudzi urwu rwehuwandu hwauchawana pane zvese zvitifiketi zvakabudiswa ne gemological laboratories. Nokuti izvi ndezvizivo zvausingazvizivi iwe pachako kana iwe usati uri gemoristist ane ruzivo uye kana iwe usina gemology laboratory tools.
Asi izvi hazvina kukwana kuenzanisa kukosha kwedombo.
Kana imwechete ibwe rakanyatsotsanangurwa, zvimwe zvinongororwa zvinoda kutsanangurwa.
Yokutanga ndiwo mavara ematombo, yechipiri ndiyo kujekesa kwebwe, chechitatu ndiko kunaka kwekucheka kwebwe uye chechina ndiko kuyerwa kwedombo.
Aya mazano mana anozivikanwa mumusika wemadhaimani, asi vashomanana vanoziva kuti mitemo yakafanana inoshandiswa kune zvigadzirwa zvose.
Pawakaratidza dombo racho, pane imwe pfungwa yekucherechedza: mutengo wematombo pamusika, zvichienderana nokuti uri kupi pane nzvimbo uye maererano nechinzvimbo chako pamusika webhizimisi.
Zvechokwadi, ibwe rakakwana rakafanana richave risingadhuri munyika yaro yakabva kana iwe uchienzanisa mutengo wayo munyika iri kune rumwe rutivi rwepasi.
Uye pakupedzisira, mutengo wematombo unove wakasiyanawo zvichienderana nekuti unotenga matombo anokosha pamusika wekutengesa zvakare. Mutengo wacho unove wakasiyanawo zvichienderana nekuti dombo rakatosimudzwa padombo here, kana kwete.
Zvechokwadi, semunzvimbo dzose dzezvemari, iyo inonyanya kuwirirana pakati pegadziri wemagetsi nemutengi, iyo yakakwirira kusiyana kwemutengo.
Iko hakuna nekukurumidza kugadzirisa. Kana iwe uchida kufungidzira mutengo wedombo, iwe unofanirwa kuzviitira wega musika nekuenda kunosangana nematombo ematombo panzvimbo iwe uripo, uye nekudaro, nekuenzanisa iwo mitengo, iwe unenge uine zano rakaipa re mutengo wematombo anokosha anoshanda munzvimbo ino, panguva ino chaiyo.
Iri ibasa risingaperi nekuti mitengo inogona kuchinja nekukurumidza.